Cajiib: Madaxweynaha ugu Mushaarka yar Africa Waa Kuma Akhri – Radio Daljir
Oktoobar 5, 2017 7:29 b 0
John Magufulia Madaxweynaha Dalka Tanzania,waa mid ka mid ah madaxda ugu mushaarka yar Afrika iyo Caalamkaba,waxaana uu bishii qaataa $4,008 (Afar kun iyo sideed) Doollar.
Mushaarka Magufuli,waxaa uu 3/1 ka yahay mushaarka Madaxweynihii isaga kaga horreeyay xilka ee uu kala wareegay Jakaya Kikwete.
2015kii ayaa loo doortay Madaxweynaha Dalka Tanzania,waxaana uu ololaha ku galay la dagaallanka Musuqa,isaga oo sheegay in Mushaarkiisu uu yahay 9Milyan oo lacagta Tazania ah uusanna dooneyn in ay intaas dhaafto.
Waxaa uu yiri “waxaan xafiiska u imid in aan marka hore qanciyo Dadka Tanzania,meelna ku sheego lacagaha Tanzania ee la xado,uma imaan mushaar kororsi mana kororsan doono”.
Markii la doortay Sanadkii 2015 xuskii madaxbanaanida waxaa uu ku beddelay maalin nadaafadeed,waxaana uu ku baaqay Tanzania oo nadiif ah.
Sidoo kale waxaa uu manuucay in cid aan ahayn Madaxweynaha iyo Wasiirka arrimaha dibadda diyaarad u raacana meel ka baxsan Tanzania,Wasiirrada deggan Hoteellada qaaliga ah ayuu digniin siiyay una sheegay in arrintaas aysan sii socon doonin.
Dadka Reer Tazania waxaa ay ku naaneysaa BALDOOSAR,waxaana uu ku caanbaxay dhismaha waddooyinka markii uu Wasiirka ahaa.
Markii la doortay 2015 ilaa hadda waxaa uu dalkiisa dibadda uga dhoofay afar jeer oo kali ah,waxaana uu afartaas xilli booqday dalalka deriska la ah Tanzania.
Madaxweynaha ugu mushaarka badan Afrika waxaa Jocob Zuma oo bishii qaata $22,600 oo doollarka Mareykanka ah,waxaana ku xiga Madaxweynaha Algeria.